Mbola tsy hita i Abubakar Idris Dadiyata avy any Nizeria, herintaona taorian’ny fakana an-keriny azy · Global Voices teny Malagasy
Mpitsikera ny governemanta Nizeriana i Dadiyata
Voadika ny 05 Septambra 2020 6:47 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, Swahili, English
Abubakar Idris Dadiyata, sary nahazoana alalana avy amin'ny The SignalNg.
Nalaina an-keriny tao an-tranony ny 1 Aogositra 2019, tao amin'ny faritr'i Barnawa akaikin'i Kaduna, avaratra andrefan'i Nizeria i Abubakar Idris Dadiyata, mpampianatra sady mpitsikera mahery vaika ny governemanta Nizeriana.
Tsy mbola hita i Dadiyata herintaona taorian'ny fakana an-keriny azy.
Nalaina an-keriny tao an-tranony tao amin'ny fanjakan'i Kaduna, Nizeria i Abubakar Idris (Didiyata). Mbola tsy fantatra ny toerana misy azy. Ny fianakaviany sy ny namany dia mitaky valiny amin'ilay fanontaniana hoe: aiza i @dadiyata? Niharan'ny fanjavonana an-tery i Abubakar.
Nampianatra tao amin'ny Oniversite Federaly Dutsinma, Fanjakana Katsina i Dadiyata. Amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny antoko mpanohitra Antoko Demokratikam-bahoaka dia matetika no nifanolana tamin'ny antokon'ny mpitondra tao amin'ny tambajotra sosialy i Dadiyata.
Vakio bebe kokoa: Apprehension rises over the abduction of a Nigerian government critic
‘Samy variana amin'ny tsy fanaovana na inona na inona ny fanjakana sy ny masoivoho federaly’
Nalain'ny mpaka an-keriny tokony ho tamin'ny 1 ora maraina teo i Dadiyata raha teo am-pahatongavana tao an-tranony izy, herintaona lasa izay ny 1 Aogositra 2019, hoy ny tatitra nataon'ny Premium Times.
Tadidin'i Kadija, vadin'i Dadiyata ny antsafa nifanaovana tamin'ny BBC fa “niantso an-telefaonina ny vadiny sady mbola nandeha ny fiarany,” rehefa nosamborin'ireo mpaka an-keriny izy. Na dia tsy naheno izay “nitranga taorian'ny antso na ny olona niresahany” aza i Kadija dia tsaroany fa “narahan'ireo mpaka an-keriny azy ny vadiny, ary niditra tao an-trano mihitsy aza izy ireo.” Nitazana avy tao an'efitranony ny vadin'i Dadiyata rehefa nentin'izy ireo izy.
Mampalahelo anefa fa mbola tsy misy ny vaovao momba ny toerana misy an'i Dadiyata. “Mampahonena izany,” hoy i Kadija tamin'ny BBC, satria manontany foana momba ny rainy tsy hita ireo zanany.
Manadio ny tenany amin'ny endrika fahamelohana na fanomezan-tsiny rehetra tamin'ny fanjavonany ny sampam-piarovana Nizeriana fa tsy nanao izay hitadiavana an'i Dadiyata.
Nandà ny departemantam-panjakana misahana ny fiarovam-pirenena (DSS) any Nizeria tamin'ny volana Janoary fa tsy any amin'izy ireo i Dadiyata. Nilaza ny sampam-piarovam-panjakana fa raha “nalain'ny lehilahy mitam-piadiana tao an-tranony i Dadiyata dia tsy midika izany fa mpiasan'ny DSS ireo lehilahy ireo.”
Toy izany koa i Aisha Dikko, lehiben'ny fampanoavana ao amin'ny fanjakan'i Kaduna, nandà ho tsy mahafantatra ny “toerana misy” azy sady nandà fa tsy niray tsikombakomba mihitsy tamin'ny fakana an-keriny an'i Dadiyata. “Mifanohitra amin'izany anefa ny fanambaràna manameloka izay mitady hanitatra ny zava-misy fa nalaina ankeriny tao amin'ny fanjakan'i Kaduna izy ka hoe midika izany fa nandray anjara tamin'izany ny fanjakana,” hoy i Dikko.
Saingy, sady tsy nampitony ny fitaintainan'ny vadin'i Dadiyata sy ny zanany roa no tsy namerina ny fahafahany ihany koa izany ireo fandavana nataon'ny DSS sy ny Governemantam-panjakana Kaduna ireo.
Mbola nanakoako tao amin'ny Twitter ny tenirohy [Herintaona Tsy nisy an'i Dadiyata] raha nitaky ny famotsorana an'i Dadiyata ny Nizeriana.
Nitaraina momba ny “fikorontanan-tsaina” naterak'ity “karazana tsimatimanota” ity tao amin'ny fianakavian'i Dadiyata i Bulama Bukarti:
Tsy takatry ny saina ny fomba nanjavonan'ity Nizeriana ity toy izany. Tsy maintsy manohy manao izay azontsika atao isika mba hiverenan'i Dadiyata amin'ny fianakaviany indray. Tsy tokony hisy toerana hanaovana an'ity karazana tsimatimanota ity. Hizaka ny vokany ireo izay naka an-keriny an'i Dadiyata. Aoriana ao raha tsy izao.
“Tohina” ity mpisera Twitter ity raha nahare ny antsafa nataon'ny vadin'i Dadiyata:
Tohina aho nandre ny vadin'i Dadiyata niresaka tamin'ny @bbchausa, androany maraina.
Ny famelan-keloka avy amin'ny mpaka an-keriny azy ny hany takiany sy ny hamelan'izy ireo ny hiverenany any amin'ny fianakaviany; indrindra ny zanany kely.
Tsy takatr'i Akin Akíntáyọ̀ ny fomba nanjavonan'i Dadiyata “tsy nisy soritra nandritra ny herintaona:”
Fanontaniana iray, nahoana no very tsy misy soritra mandritra ny herintaona tany Nizeria i Dadiyata sy ny fiarany kanefa tsy miraika akory ny amin'izany ny governemanta fa mitady fanadiovan-tena ary tsy mandray andraikitra feno amin'ny fitadiavana azy, indrindra fa izy ireo no lasibatry ny tsikerany ?
Indrisy anefa fa toa tsy misy miraharaha ny fitadiavana ilay mpitsikera.
“Samy seriny amin'ny fialana amin'ny fanomezan-tsiny ny fanjakana sy ny sampan-draharaha federaly” ary “tsy manao na inona na inona” hoy ilay mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona, ​​Profesora Chidi Odinkalu, tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny Vyral Africa:
Ankoatra ny filazana fa tsy fantatr'izy ireo hoe aiza izy dia tsy nisy olona nanao ezaka hilazana amintsika ny zavatra nataon'izy ireo mba hahitana azy ary nahoana no tsy ahitan'izy ireo azy. Milaza aminao izany fa tsy misy dikany firy isika amin'ny maha olom-pirenena antsika. Ny manontany hoe aiza i Dadiyata ny kely indrindra azontsika atao ary maninona ny governemanta no tsy mahita azy.